Ungandinceda njani uPinterest namhlanje? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Amaqonga ohlukeneyo onxibelelwano aphucule unxibelelwano lwawo ukuze anike abasebenzisi okona kulungileyo yonke imihla. Nangona kunjalo, iPinterest lelinye lamaphepha aguquke ukubonelela ngamava ihlala ihleli kwaye inyanisekile kubo bonke abantu ogqibe kwelokuba angene kuyo.
Nangona uninzi lungazazi zonke izinto ezintle ezinokuziswa yiPinterest namhlanje, esi sixhobo siqulethe izinto ezikuvumela ukuba uhlaziye umhlaba kwishishini, kwezentlalo kwanakwisihloko sokukukhokela kwimibuzo yezimvo kwizihloko ezahlukeneyo.
Ke ngoko, iPinterest inezinto ezininzi eziza kuyenza ibe lelinye lawona maphepha anomtsalane okwenza imisebenzi eyahlukeneyo namhlanje. Yintoni engakunika umbono wokusebenzisa yile cinga ngephepha njengenjini yokukhangela iiprojekthi ezizayo, kuba oku kunokunikela.
IPinterest njengoncedo lwezezimali
Akukho mfihlo kuye nakubani na ukuba izinto zitshintshile enkosi kwiminyaka yedijithali kwaye ngakumbi kuthethathethwano. Abantu bakhetha ukwenza iminxeba yevidiyo ukuvala izivumelwano kunokuya kwiintlanganiso ezinde kunye nezisokolisayo ezingasoloko zishiya umbono opheleleyo wento abayifunayo.
Ngaphambi kwayo yonke le nto, I-Pinterest ibe liphepha lokukhuthaza umbono ukuze abantu abaqala iinzame zabo bafeze yonke into abayifunayo ngexesha elifutshane. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba abasebenzisi ekuthethwa ngabo babeke yonke imizamo yabo ukufezekisa umdlalo onjalo.
Ngaba zininzi iziphumo ezilungileyo?
Iziphumo zixhomekeke ngokukodwa kumsebenzi abantu abafuna ukufaka isandla namhlanje. Ngapha koko, abasebenzisi bahlala kufuneka bakhangele ikakhulu indlela yokuhamba wentsholongwane kwizinto ezicetywayo.
Kukho iindlela ze Ukusetyenziswa kwePinterest njengeqonga lenethiwekhi Kodwa yonke into iya kuxhomekeka kumandla onawo wokusebenzisa obu buchule namhlanje.
Izibonelelo zokusebenzisa iPinterest namhlanje
Ayingawo onke amaphepha kwiPinterest anokunikezela ngezi ntsuku. Nangona kunjalo, enkosi kukhetho olukhulu, izinto ezivelayo zinika abasebenzisi ithuba lokusetyenziswa.
Phuhlisa izakhono zakho zePinterest
Abantu abazinikele kuphuhliso lweeprojekthi, izicwangciso kunye nemibono banamathuba onke okushiya ulwazi lwabo kwiphepha ukuya nceda abanye. Ndiyabulela koku, abaninzi baphucule izixhobo zabo kwaye banokunika ubungqina kuguquko kwiinkampani ezincinci nezikhulu ezinamaphupha abo.
Ukukhula kwemali kwiPinterest
Abasebenzisi banokubonisa izimvo zabo kwaye bade bathengise ngePinterest ukufezekisa ingeniso yezoqoqosho engcono. Nangona kunjalo, ukusebenzisana nabantu besithathu ikwangumbono olungileyo oya kuthi uvelise iziphumo ezigqwesileyo.
Fumana unxibelelwano kwiPinterest
Iinkampani zinamandla okufumana Iinkampani ezilungileyo kwiPinterest ukuba yenye yeenketho zomanyano. Enkosi koku bakwazile ukuvela ngokudibeneyo nakwindawo yoyilo.
Imibutho emininzi iye yabonisa ukuba enkosi kwimanyano phakathi kweenkampani bayayiphucula imbonakalo yabo phambi koluntu.
1 IPinterest njengoncedo lwezezimali
1.1 Ngaba zininzi iziphumo ezilungileyo?
2 Izibonelelo zokusebenzisa iPinterest namhlanje
2.1 Phuhlisa izakhono zakho zePinterest
2.2 Ukukhula kwemali kwiPinterest
2.3 Fumana unxibelelwano kwiPinterest